Best Rectagular Big Wheat saxan casho soo saaraha iyo Warshada | Tuoda
TD-DG-CJ-015 Saxan afargees ah oo caws qamadi ah
4 Midabyada Saxannada Casho ee Layliga ah ee Weyn, Saxannada Cawska Qamadiga ah ee Aan La jabin karin, Makiinada weelka lagu dhaqo oo Badbaado leh oo Dib loo Isticmaali karo
Cabirka Alaabta 21*13cm
Miisaanka Shayga 63g
ALAAB LAGU AAMIN KARO
Taarikada cashada waxaa laga sameeyay caws qamadi ah, heer badbaado leh oo caafimaad u leh deegaanka iyo qoysaska. Ku raaxayso in la hayo & adag
Awood weyn, saxannada cashada ee dib loo isticmaali karo waxay ku habboon yihiin baahiyahaaga maalinlaha ah iyo wax kasta oo aad rabto inaad qabato. Taarikada keega fudud, oo ku habboon xafladaha, arooska, dhalashada, picnic, iyo isticmaalka guriga. Doorasho wanaagsan oo loogu talagalay guri-guri, Sannad cusub, Christmas, aroos, xaflad, dhalasho, hadiyad fasax!
NAQAL GAAR AH
Taarikada miraha labajibbaaran waxaa loogu talagalay afar midab oo jilicsan: casaan, buluug, cagaar iyo beige. Taarikada cawska sarreenku waxay keenaysaa qurux iyo qurux gaar ah qolkaaga qadada. Cuntada si fiican ayaa loo kaydin karaa iyadoo leh geeso ballaaran.
WAA LA DUWAN KARAA
Taarikada macmacaanka waxaa loo dhejin karaa si wax ku ool ah waxayna keydin kartaa qolka miiskaaga iyo golahaaga. Si fudud loo kaydin karo
FUDUD in la Nadiifiyo
Si sahal ah ugu nadiifi biyo ama saabuun oo kaliya geli makiinada weelka dhaqda, taasoo ku siinaysa raaxadaada ugu badan.
Hore: Biyodegradable Wheat Straw Plate
Xiga: Saxan saxan caws ah oo qamadi ah oo aan jabin karin